ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီတွင် ပါတီဝင်တစ်ဦး ဖြစ်နေသောကြောင့် ယခင်လို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအား ဝေဖန်ပြောကြားတော့မည်မဟုတ်ဟု ဦးကျော်ဇေယျ ပြောကြား ~ Myanmar Online News
ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီတွင် ပါတီဝင်တစ်ဦး ဖြစ်နေသောကြောင့် ယခင်လို ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအား ဝေဖန်ပြောကြားတော့မည်မဟုတ်ဟု ဦးကျော်ဇေယျ ပြောကြား
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီတွင် ပါတီဝင်တစ်ဦး​ ဖြစ်နေပြီဖြစ်၍ ယခင်ကလို မီဒီယာများသို့ အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အပြုသဘော​ ဝေဖန်ပြောကြားချက်များအား တက်ကြွစွာ ပြောကြားတော့မည် မဟုတ်သည်ကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ၊...
ယခင်အချိန်များကပင် လေးစားချစ်ခင်ရပါသော အကိုကြီး ဆရာဦးမြတ်ခိုင် မှအင်တာဗျူးကိစ္စရပ်အတွက် ခေါ်ခဲ့သော်လဲယခုရက်ပိုင်းတွင်ခဏတာခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းပန်လိုက်ရပါသည်၊ထို့ပြင် အခြားအခြားသော အသံလွှင့်/ပုံနိုပ်/ရုပ်မြင်မီဒီယာများမှလည်းဖုန်းဖြင့် လူဖြင့်တွေ့ဆုံကာ အကူအညီ တောင်းခံခြင်းများကိုလဲ ယခုရက်ပိုင်းတွင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် လေးစားစွာ တောင်းပန်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ၊အဓိက အကြောင်းကတော့ ယခင်ကအာဏာရ ပါတီမှ ပါတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်၍ ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်ခဲ့သော်လဲ ယခုအခါ တခြားသောပါတီဝင်(လွှတ်တော်အတွင်း ပါတီတူ ကိုယ်စားလှယ် မရှိသေးသော)တစ်ဦးတည်းဖြစ်နေသောကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ပါတီမတူသဖြင့် တမင်ပင်ဝေဖန်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆ ခံရနိုင်တာကြောင့် တစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်၊ သို့သော် မနေ့ကတော့ ပြည်ပနိုင်ငံသား တစ်ဦးအား အခြေအနေအရ မလွှဲသာပင်တွေ့ဆုံခဲ့ရပါသည် ခင်ဗျာ၊မီဒီယာများ၏ ဖုန်းဖြင့်မေးမြန်းသော လတ်တလော ကိစ္စရပ်အ​ကြောင်းအရာများကတော့ YUPT၏ ရှယ်ယာရှင်များ အကြောင်းကများပါသည်၊ အဆိုပါကိစ္စရပ်အပေါ်ရိုးရှင်းစွာပင်စဉ်းစားကြည့်ပါက ထင်ရှားစွာသိမြင်နိုင်မည် ထင်ပါသည်၊အဓိကအချက်ကတော့ ရှယ်ယာရှင်များအတွက် သုံးနှစ်တာပြည့်မြောက်ခဲ့သော်လဲ အစုပေါ်အမြတ်ကို ပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိ၊ထို့ပြင် အမြတ်ငွေမရ၍မိမိ ထည့်ဝင်ထားသောရှယ်ယာများအားပြန်ထုတ်လိုပါကလဲ ထုတ်လို့မရ၊အမှန်တကယ်တော့ တာဝန်အရှိဆုံး လူကြီးမင်း ပြောသလို ကားများအား တန်ဘိုးလျှော့
သတ်မှတ်သည့် ငါးနှစ်အချိန်ကာလမပြည့်သေးသောကြောင့်အမြတ်မရတာ ဖြစ်ပါသည် ဆိုသောဖြေရှင်းချက်ကလဲ လက်ခံ နိုင်စရာမရှိပါ၊ ရှင်းပြရလျှင် ကားတန်ဘိုးလျှော့ရန်အတွက်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်၍ အဆိုပါ တန်ဘိုးအား နှစ်စဉ် လျှော့ချ ခါအမြတ်တွက်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်၊ဥပမာ----ကားတစီး လျှင်သိန်းတစ်ရာတန်သည်ဆိုပါက ငါးနှစ်ဟု သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် သိန်းနှစ်ဆယ်လျှော့ပြီး ဝင်ငွေများ အပေါ် အမြတ်တွက်ပေးရန်သာ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်ယခုတော့ အမြတ်က ဘဏ်အတိုးလောက်တောင်ပြန်မရဘဲသုံးနှစ်ကြီးများတောင်ရှိနေပြီဆိုတော့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သူများ မမှားပါဟု ယူဆရမှာဖြစ်ပါသည်၊ ယခု တော့ငါးနှစ်ပြည့်မှ အမြတ်ရမှာဟု ပြောလိုက်သောစကားရပ် မှာကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခါလုပ်ကိုင်နေကြသော လုပ်ငန်းရှင်ကြီးငယ် များအားလုံးကကြားရတာ ဟားစရာကြီး ဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာ၊
ဒါတောင် YUPTကတစ်ဦးချင်း အစုရှယ်ယာရှင်တွေကျွန်တော့်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါဗျာ၊အကြောင်းရင်းကတော့ယခင်နှစ်2016/2017စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာမှာYUPTကမော်တော်ယာဥ်များအတွက်ယာဥ်တန်ဘိုးလျှော့က12.5%ဟု ​သတ်မှတ်ကာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါ့ကြောင့် ပင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့်ဆွေးနွေးသောအခါYBS ကားသစ်များအနေဖြင့် ယာဥ်တန်ဘိုးလျှော့အား12.5%ဖြစ်တာ ကြောင့်ကားများမှာ ယခုလိုပြေးဆွဲပုံနှင့် ရှစ်နှစ်တာ ကြာရှည်ခံပါ့ မလား? ဟု မေးသောအခါကျမှယခု2017/2018အစီရင်ခံစာမှာ12.5%က နေ20% ပြောင်းသွားလို့ ငါးနှစ် ဖြစ်သွားတာပါမပြောင်းခဲ့ရင် ငါးနှစ်မဟုတ်ဘဲ ရှစ်နှစ်ကြာမှသာ အမြတ် ရ
မည်ဟု ပြောလိုက်မှာ သေချာပါတယ် ခင်ဗျာ၊အဆင်ပြေကြပါစေ ဟု ဆုမွန်ကောင်းများတောင်းလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ၊😁
ပြည်ပကနိုင်ငံခြားသားနှင့် ပြည်တွင်းက မီဒီယာများမှ မေးမြန်းကြသည့် YPစက်သုံးဆီဆိုင်များ ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် စာရင်းစစ်ချုပ် အား လာမည့်လွှတ်တော် တွင်တင်ပြမည့် အစီရင်ခံစာ၌ အဆိုပါ YPဆီဆိုင်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ မှ ရန်ကုန်မြေများ ရောင်းချနေမှုအား ပြည်သူအများ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သိရှိရေးသေချာစစ်ဆေး အစီရင်ခံပေးပါ ဟု တင်ပြထားပါကြောင်း....စသည်ဖြင့် သူ၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားဖော်ပြထားကြောင်း တွေရှိရပါသည်။
Ref ; Kyaw Zay Ya'Fb #Myanmar_Online_News
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ပြည်သူ့ရှေ့ဆောင်ပါတီတွင် ပါတီ ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်၍ ယခင်ကလို မီဒီယာများသို့ အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် အပြုသဘော ဝေဖန် ပြောကြားချက်များအား တက်ကြွစွာ ပြောကြားတော့မည် မဟုတ်သည်ကို နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးပါခင်ဗျာ၊
ယခင်အချိန်များကပင် လေးစားချစ်ခင်ရပါသော အကိုကြီး ဆရာဦးမြတ်ခိုင် မှအင်တာဗျူးကိစ္စရပ်အတွက် ခေါ်ခဲ့သော်လဲယခုရက်ပိုင်းတွင်ခဏတာခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းပန်လိုက်ရပါသည်၊ထို့ပြင် အခြားအခြားသော အသံလွှင့်/ပုံနိုပ်/ရုပ်မြင်မီဒီယာများမှလည်းဖုန်းဖြင့် လူဖြင့်တွေ့ဆုံကာ အကူအညီ တောင်းခံခြင်းများကိုလဲ ယခုရက်ပိုင်းတွင် ခွင့်လွှတ်ပေးပါရန် လေးစားစွာ တောင်းပန်အပ်ပါသည် ခင်ဗျာ၊အဓိက အကြောင်းကတော့ ယခင်ကအာဏာရ ပါတီမှ ပါတီဝင်တစ်ဦးဖြစ်၍ ပြတ်ပြတ်သားသားဝေဖန်ခဲ့သော်လဲ ယခုအခါ တခြားသောပါတီဝင်(လွှတ်တော်အတွင်း ပါတီတူ ကိုယ်စားလှယ် မရှိသေးသော)တစ်ဦးတည်းဖြစ်နေသောကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ပါတီမတူသဖြင့် တမင်ပင်ဝေဖန်သည်ဟုထင်မြင်ယူဆ ခံရနိုင်တာကြောင့် တစ်ကြောင်းဖြစ်ပါသည်၊ သို့သော် မနေ့ကတော့ ပြည်ပနိုင်ငံသား တစ်ဦးအား အခြေအနေအရ မလွှဲသာပင်တွေ့ဆုံခဲ့ရပါသည် ခင်ဗျာ၊မီဒီယာများ၏ ဖုန်းဖြင့်မေးမြန်းသော လတ်တလော ကိစ္စရပ်အကြောင်းအရာများကတော့ YUPT၏ ရှယ်ယာရှင်များ အကြောင်းကများပါသည်၊ အဆိုပါကိစ္စရပ်အပေါ်ရိုးရှင်းစွာပင်စဉ်းစားကြည့်ပါက ထင်ရှားစွာသိမြင်နိုင်မည် ထင်ပါသည်၊အဓိကအချက်ကတော့ ရှယ်ယာရှင်များအတွက် သုံးနှစ်တာပြည့်မြောက်ခဲ့သော်လဲ အစုပေါ်အမြတ်ကို ပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိ၊ထို့ပြင် အမြတ်ငွေမရ၍မိမိ ထည့်ဝင်ထားသောရှယ်ယာများအားပြန်ထုတ်လိုပါကလဲ ထုတ်လို့မရ၊အမှန်တကယ်တော့ တာဝန်အရှိဆုံး လူကြီးမင်း ပြောသလို ကားများအား တန်ဘိုးလျှော့
သတ်မှတ်သည့် ငါးနှစ်အချိန်ကာလမပြည့်သေးသောကြောင့်အမြတ်မရတာ ဖြစ်ပါသည် ဆိုသောဖြေရှင်းချက်ကလဲ လက်ခံ နိုင်စရာမရှိပါ၊ ရှင်းပြရလျှင် ကားတန်ဘိုးလျှော့ရန်အတွက်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်၍ အဆိုပါ တန်ဘိုးအား နှစ်စဉ် လျှော့ချ ခါအမြတ်တွက်ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်၊ဥပမာ----ကားတစီး လျှင်သိန်းတစ်ရာတန်သည်ဆိုပါက ငါးနှစ်ဟု သတ်မှတ်ထားသောကြောင့် တစ်နှစ်လျှင် သိန်းနှစ်ဆယ်လျှော့ပြီး ဝင်ငွေများ အပေါ် အမြတ်တွက်ပေးရန်သာ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်ယခုတော့ အမြတ်က ဘဏ်အတိုးလောက်တောင်ပြန်မရဘဲသုံးနှစ်ကြီးများတောင်ရှိနေပြီဆိုတော့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်သူများ မမှားပါဟု ယူဆရမှာဖြစ်ပါသည်၊ ယခု တော့ငါးနှစ်ပြည့်မှ အမြတ်ရမှာဟု ပြောလိုက်သောစကားရပ် မှာကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခါလုပ်ကိုင်နေကြသော လုပ်ငန်းရှင်ကြီးငယ် များအားလုံးကကြားရတာ ဟားစရာကြီး ဖြစ်နေတာပေါ့ခင်ဗျာ၊
ဒါတောင် YUPTကတစ်ဦးချင်း အစုရှယ်ယာရှင်တွေကျွန်တော့်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါဗျာ၊အကြောင်းရင်းကတော့ယခင်နှစ်2016/2017စာရင်းစစ်အစီရင်ခံစာမှာYUPTကမော်တော်ယာဉ်များအတွက်ယာဉ်တန်ဘိုးလျှော့က12.5%ဟု သတ်မှတ်ကာ ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်၊ဒါ့ကြောင့် ပင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့်ဆွေးနွေးသောအခါYBS ကားသစ်များအနေဖြင့် ယာဉ်တန်ဘိုးလျှော့အား12.5%ဖြစ်တာ ကြောင့်ကားများမှာ ယခုလိုပြေးဆွဲပုံနှင့် ရှစ်နှစ်တာ ကြာရှည်ခံပါ့ မလား? ဟု မေးသောအခါကျမှယခု2017/2018အစီရင်ခံစာမှာ12.5%က နေ20% ပြောင်းသွားလို့ ငါးနှစ် ဖြစ်သွားတာပါမပြောင်းခဲ့ရင် ငါးနှစ်မဟုတ်ဘဲ ရှစ်နှစ်ကြာမှသာ အမြတ် ရ
ပြည်ပကနိုင်ငံခြားသားနှင့် ပြည်တွင်းက မီဒီယာများမှ မေးမြန်းကြသည့် YPစက်သုံးဆီဆိုင်များ ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင် စာရင်းစစ်ချုပ် အား လာမည့်လွှတ်တော် တွင်တင်ပြမည့် အစီရင်ခံစာ၌ အဆိုပါ YPဆီဆိုင်များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရ မှ ရန်ကုန်မြေများ ရောင်းချနေမှုအား ပြည်သူအများ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ သိရှိရေးသေချာစစ်ဆေး အစီရင်ခံပေးပါ ဟု တင်ပြထားပါကြောင်း....စသည်ဖြင့် သူ၏လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားဖော်ပြထားကြောင်း တွေရှိရပါသည်။